Sunday, April 15, 2018 ရယ်ရွှင်ဖွယ်ရာ
(ဆရာဝန်) "ခင်ဗျားရဲ့ ကျန်းမာရေးအရဆိုရင် တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ရေ ၁၀ ခွက် သောက်ရမယ်" 🤔 🤔 🤔
(လူနာ) "ဒါတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆရာ" 🙁 🙁
(ဆရာဝန်) "ဘာလို့ မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲဗျ??" 😠 😠
(လူနာ) ကျနော့အိမ်မှာ ရေခွက် ၄ လုံးပဲ ရှိလို့ပါ ဆရာ" 😥 😥
မိတ်ဆွေဟောင်း ၂ ဦး ပြန်လည်ဆုံစည်းချိန်...
"ကျုပ်မှာ သား ၄ ယောက်ရှိတယ်ဗျ... ပထမ တစ်ယောက်က အင်ဂျင်နီယာ... ဒုတိယ တစ်ယောက်က စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်နဲ့ ဘွဲ့ရထားတာ... တတိယတစ်ယောက်က ပါရဂူ... စတုတ္ထမြောက် သားကတော့ သူခိုးဂျပိုးပေါ့ဗျာ...."
"ဒါဆိုရင် ခင်ဗျားက စတုတ္ထမြောက်သားကို ဘာဖြစ်လို့ အိမ်ကနေ မောင်းမထုတ် လိုက်တာ လဲ???"
"မောင်းထုတ်လို့ မရဘူးဗျ... သူက ကျုပ်တို့အိမ်မှာ အဓိက ဝင်ငွေ ရှာပေးနေတဲ့သူဗျ... ကျန်တဲ့ ၃ ယောက်က အလုပ်လက်မဲ့တွေချည်းပဲ..."
ယင်တစ်ကောင်ဟာ သူမ ချစ်တဲ့ ခြင်ထီး တစ်ကောင်ကို လက်ထပ်ယူလိုက်တယ်... 💕 💕
နောက်တစ်နေ့မှာ ယင်ကောင်မက ရှိုက်ကြီးတငင်နဲ့ ငိုကြွေးနေတယ်... 😫 😫
ဒါကို ညီမဖြစ်သူက တွေ့ပြီး "ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်တောင် ငိုနေရတာလဲ အစ်မ" 🤔 🤔 ဆိုပြီး မေးလိုက်တယ်..
ဒီအခါ အစ်မဖြစ်သူက ပြန်ဖြေတယ်...
"အစ်မ မနေ့ညက အိပ်ယာဝင်တော့ ခြင်ဆေးခွေ ထွန်းပြီး အိပ်လိုက်တယ်... မနက်မိုးလင်းတော့ နင့်ခဲအိုက အသက်မရှိတော့ဘူး..." 😥 😪
အိမ်ထောင်ပြုချင်နေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ဟာ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူကို တိုင်ပင်တယ်...
"အိမ်ကမိဘတွေနဲ့ ပေးတွေ့မလို့ ခေါ်လာတဲ့ ချစ်သူ မိန်းကလေးတိုင်းကို အမေက သဘောမကျဘူး ဖြစ်နေတယ်ကွာ..."
"Ohh! ဒါများ အလွယ်လေးပါကွာ... မင်းလုပ်ရမှာက မင်းအမေနဲ့တူတဲ့ ချစ်သူမိန်းကလေးမျိုးကို ရှာပြီးခေါ်လာရမှာကွ.."
"ငါလုပ်ပြီးပါပြီ သူငယ်ချင်းရာ... အဲလိုကျပြန်တော့လည်း ငါ့အဖေက မကြိုက်ပြန်ဘူး..."
Sunday, April 15, 2018 ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ
တစ်ခါတုန်းက မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့မှာ သမီးဖြစ်သူနဲ့ အတူ နေထိုင်တဲ့ လယ်သမားကြီး တစ်ဦးရှိတယ်... သူ့မှာ ငွေတိုးပေးစားတဲ့ သူဌေးထံက အတိုးနဲ့ ယူထား တဲ့ အကြွေးတွေက တဖြည်းဖြည်းများလာလို့ ပြန် မဆပ်နိုင်ပဲ အကြပ်တွေ့နေတယ်... သူဌေး ကလည်း အတော်လေးအိုမင်းနေပြီး... ဖြစ်ချင်တော့ သူက လယ်သမားကြီးရဲ့သမီးကို မျက်စိကျနေတယ်..
တစ်နေ့မှာတော့ သူဌေးဖြစ်သူက သူ့ကိုပေးစရာရှိတဲ့ အကြွေအားလုံးကို လုံးဝလျှော်ပစ်ဖို့ လယ်သမားကြီးနဲ့ အပေးအယူတစ်ခုလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်...
သူတို့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း သူဌေးနဲ့ လယ်သမားကြီးရဲ့ သမီးအကြား ဂိမ်း(Game)တစ်ခု ကစားဖို့ ပြင်တယ်... စပြီးတော့ သူဌေးက...
"အိတ်တစ်လုံးထဲကို ကျောက်စရစ်ခဲ အဖြူတစ်လုံး အမည်းတစ်လုံး ထည့်ထားမယ်... အဲဒီနောက် သမီးက အိတ်ထဲက ကျောက်စရစ်ခဲတစ်လုံးကို မကြည့်ပဲ နိုက်ရမယ်... အမည်းရောင် ရခဲ့မယ်ဆိုရင် အကြွေး အားလုံးကို လျှော်ပေးမယ်... သမီးကိုလည်း သိမ်းမယ်... တကယ်လို့ အဖြူရောင် ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အကြွေးအားလုံးကို လျှော်ပေးမယ်... သမီးတော့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရမယ်..." ဆိုပြီး ရှင်းပြတယ်...
သူဌေးက လယ်သမားကြီးခြံထဲမှာ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ ကျောက်စရစ်ခဲတွေပေါ်ရပ်ပြီး ကျောက်စရစ်ခဲ နှစ်လုံးကို ကောက်ယူပြီး အိတ်ထဲ ထည့်လိုက်တယ်... ဒီလိုကောက်ယူနေစဉ် အားလုံးဟာ အမည်းရောင်တွေချည်းပဲ ဆိုတာ လယ်သမားကြီးသမီးက သတိပြုမိလိုက်တယ်... ဒီနောက် လယ်သမားကြီသမီးကို အိတ်ထဲက ကျောက်စရစ်ခဲတစ်လုံးကို နှိုက်ဖို့ပြောလိုက်တယ်... .
ဒီလိုအခြေအနေမှာ သူမ လုပ်နိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သဘာဝအားဖြင့် စဉ်းစားရွေးချယ်စရာ ၃ ခုပဲရှိတယ်... နံပါတ် (၁) လုံးဝ မနှိုက်ပဲ ငြင်းဆန်မလား?... နံပါတ်(၂) ကျောက်စရစ်ခဲ ၂ လုံးလုံးကို နှိုက်ယူပြီး သူဌေးရဲ့ မတရားလိမ်လည်မှုကို ဖော်ထုတ်မလား?... နံပါတ်(၃) အားလုံး အမည်းရောင်တွေပဲဆိုတာ သိလျက်နဲ့ ဖခင်ရဲ့အကြွေးတွေအတွက် သူမကိုယ်သူမ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံပြီးတော့ပဲ နှိုက်မလား?...
ဒါပေမယ့်... သမီးဖြစ်သူဟာ အိတ်ထဲကနေ ကျောက်စရစ်ခဲတစ်လုံးကို နှိုက်ယူပြီး မကြည့်ခင်မှာ မတော်တဆ လွတ်ကျတဲ့ပုံစံမျိုး အောက်ကကျောက်စရစ်ခဲတွေအကြား လွတ်ချလိုက်တယ်... ပြီးတော့ သူဌေးကို ပြောလိုက်တယ်...
"အိုး! ဆောရီး!! ကျမဟာ အတော်လေး ဖရိုဖရဲနိုင်တာပဲ... ဒါပေမယ့် ကိစ္စမရှိပါဘူး... အိတ်ထဲမှာကျန်တဲ့ အလုံးကိုပဲ ကြည့်ပေးပါ... ဒါဆိုရင် ကျမ လွတ်ကျသွားတဲ့အလုံးဟာ ဘာအရောင်လဲဆိုတာ ပြောလို့ ရနိုင်ပြီပေါ့ရှင်...."
သူဌေးက မရိုးမသားနဲ့ အားလုံး အမည်းရောင်တွေပဲ ထည့်ခဲ့တဲ့အတွက် အိတ်ထဲမှာ ကျန်တဲ့အရောင် ကလည်း အမည်းရောင်ပါပဲ... သူ့ရဲ့အလိမ်ဇတ်တွေ ပေါ်လာမှာစိုးတဲ့အတွက် လွတ်ကျသွားတဲ့ ကျောက်စရစ်ခဲဟာ အဖြူရောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားနဲ့ပဲ အဆုံးအဖြတ် ပေးလိုက်ရတယ်... အဲဒီနောက် သူဌေးအနေနဲ့ အကြွေးတွေအားလုံးကို လျှော်ပေးလိုက်ရပြီး သမီးဖြစ်သူလည်း လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ရသွားတော့တယ်......။
(ဒီလိုဘေးကျပ်နံကျပ် အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါတိုင်း သမရိုးကျစဉ်းစားတွေးခေါ်မှု တစ်ခုထဲမှာတင် အညံ့ခံအရှုံးမပေးပဲ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ဖောက်ထွက်စဉ်းစားမှုတွေကနေတဆင့် အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ အမြဲတမ်း ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း သင်ခန်းစာလေးပါ... )
Sunday, April 15, 2018 Photography ပညာရပ်ဆိုင်ရာ | ဓါတ်ပုံ | မတော်တဆမှု | သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ပုံထဲမှာတွေ့ရတဲ့ မီးစွဲလောင်နေတဲ့ လူငယ် တစ်ယောက်ရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေဟာ Amsterdam မှာ နှစ်စဉ် ကျင်းပရွေးချယ်တဲ့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်း ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲ (2018 World Press Photo-WPP) မှာ ထိပ်ဆုံးဆု စာရင်း ဝင်သွားပါတယ်...
၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလ (၃)ရက်နေ့ ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့ မြို့တော် ကရားကတ်စ်(Caracas)မှာ သမ္မတ Nicolas Maduro ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲအတွင်း အတိုက်အခံနဲ့ အစိုးရတပ်တွေအကြား ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု တစ်ခုမှာ ရဲတွေရဲ့ဆိုင်ကယ်ဆီတိုင်ကီ ပေါက်ကွဲပြီး အခုလို မီးစွဲလောင်ခဲ့တာပါ...
ဒီပုံတွေကို ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသား ဓါတ်ပုံဆရာလည်းဖြစ်.. AFP ဓါတ်ပုံသတင်းထောက်လည်းဖြစ်တဲ့ Ronaldo Schemidt က ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှုအတွင်း အမိအရ ရိုက်ယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်...
ပြိုင်ပွဲမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၂၅ နိုင်ငံမှ ဓါတ်ပုံဆရာ ၄,၅၄၈ ဦးမှ ဓါတ်ပုံပေါင်း ၇၃,၀၄၄ ပုံ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်.....
Photography ပညာရပ်ဆိုင်ရာ, ဓါတ်ပုံ, မတော်တဆမှု, သဘာဝဘေးအန္တရာယ်,
Wednesday, October 18, 2017 ရယ်ရွှင်ဖွယ်ရာ
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအွန်းက မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ ၁၀နှစ်အတွင်းမှာ နေကမ္ဘာကို လူပို့စေလွှတ်မယ်လို့ ကြေငြာတယ်...
ဒါကို သတင်းထောက်တစ်ဦးက ထပြီးမေးတယ်....
"လူပို့တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ... ဒါပေမယ့် နေကမ္ဘာက အရမ်းပူပြင်းတော့ ခင်ဗျားလူတွေက ဘယ်လို ဆင်းသက်နိုင်မှာလဲဗျ..??" 🤓 🤓 🤓
ဒီမေးခွန်းကို ကြားတဲ့အခါ အားလုံးငြိမ်သက်သွားပြီး ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိဘူး ဖြစ်နေတယ်... 🤔 🤔 🤔
အဲဒီအချိန် ကင်ဂျုံအွန်းက တည်ငြိမ်စွာနဲ့ ဖြေလိုက်တယ်...
"ကျုပ်တို့က ညအချိန်မှာသာ ဆင်းသက်မှာပါ..." 😚 😚 😚
သူ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီး တစ်ခုလုံးရဲ့ ချီးမွမ်းသြဘာသံတွေက မိုးခြိမ်းသံတွေအလား ဆူညံပွက်လောရိုက်သွားတယ်... 🤗 🤗 🤗
တချိန်တည်းမှာပဲ ကင်ဂျုံအွန်းရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရွမ်းနဲ့ သူ့အစိုးရအဖွဲ့ကလည်း အိမ်ဖြူတော်မှာ ထိုင်ကြည့်နေကြတယ်...
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့စကားကို အမေရိကန်သမ္မတက ကြားတဲ့အခါ မချိပြုံးနဲ့ ပြောလိုက်တယ်...
"တော်တော် ရှုးတဲ့ကောင်ပဲ!! ညဘက်မှာ 'နေ' မှ မရှိတာ.." 😎 😎 😎
ခုဆိုရင် သူ့အစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့ ချီးမွမ်းသြဘာသံတွေက မိုးခြိမ်းသံတွေအလား ဆူညံပွက်လော ရိုက်သွားလေတော့သတည်း.....။ 🤗 🤗 🤗
😝 😝 😝 😄 😄 😄 😂 😂 😂 😁 😁 😁
Myanmar Model - San Yati Moe Myint | စံရတီမိုးမြင့်